Shukaansiga Internet-ka ma caafimaad darra ayaa laga qaadaa? - Jigjiga Online
HomeArimaha BulshadaShukaansiga Internet-ka ma caafimaad darra ayaa laga qaadaa?
Ragga iyo dumarka isticmaala baraha internet-ka ee lagu haasaawo ama shukaansiga lagu sameeyo ayaa la sheegay inay khatar ugu jiraan inuu fuulo cayil caafimaad darro ah, sida lagu sheegay baaritaan la sameeyay.
Baaritankan oo ay ka qayb galeen 1,700 qof oo ku nool dalka Maraykanka ayaa lagu ogaaday in caafimad darro ay adagtahay sida looga soo kabto laga qaado shukaansiga dhanka Internet-ka.
Dhibaatooyin dhanka cunta cunista ah ayaa la sheegay inay dadkan la tacaalan.
Shukaansiga dhanka Internet-ka ayaa sanadihii la soo dhaafay aad u kordhay, iyada oo ay jiraan lammaaneyaal badan oo isku guursada xiriirka noocaas ah.
Dadka isticmaalaya barahan ayaa dadaal ugu jira sidii ay qof la wadaaga nolosha ku heli lahaayeen.
Cilmi baarista ayaa waxaa lagu sameeyay isbarbar dhig ku aaddan dhaqanka dadka isticmaala barahaas iyo kuwa aanan isticmaalin.
Waxay khubaradu ogaadeen in dadka isticmaalaya ay leeyihiin lix dabeecadood oo aan caafimadka qofka u fiicnayn sida mataga, isticmaalka daawooyinka cayilka, cunto la’aanta iyo isticmaalka daawooyinka jir dhiska.
Dadka baaritanka lagu sameeyey oo ka koobnaa rag iyo dumar ayaa la sheegay inay isticmaalaan dawooyin kala duwan oo ay uga hor tagaan xannuunnada noocaas ah.
Ku dhawaad kala bar dumarka iyo ragga ka qayb qaatay daraasaddan ayaa la sheegay inaysan cunnooyin fiican qaadan si ay culayska jirkooda u xakameeyaan.
Ragga ayaa la sheegay in iyaguna badanaa ay isticmaalan daawooyinka jir dhiska si ay murqahooda u kobciyaan, taasi oo la sheehay inay badanaa horseeddo caafimaad darro soo wajahda dadkan.
Dr Alvin Tran, oo baaritankan madax ka ahaa waxna ka dhiga jaamacadaha Harvard iyo Boston, ayaa sheegay in heerka caafimaad darrada ee ay dhaqamadaan la imaadaan ay kor u sii kordhayso.
“Walaac dhanka jirka qofka ah”
Tom Quinn, ayaa sidoo kale sheegay inay baaritankan soo dhaweeyeen uuna ka caawin doono in la ogaado lagana hortago dhibaatooyinka dadka uga imaanaya dhanka cuntada.
“Ma’ahan qof walba oo isticmaala cuntooyinka caafimaad darrada keena ee lagu xakamaynayo culayska oo kaliya balse waxay qof kasta oo barahaas isticmaala u horseedayaan cuduro badan.” Ayuu yiri.
“Waxaa muhiim ah in la ogaado in baaritankan uusan cadaynaynin xiriirka caafimad darrada ee u dhexeeya shukaanksiga dhanka Internet-ka iyo hababka cayilka lagu xakamaynayo, hase yeeshe waxaa muhiim ah in dadka isticmaala la sheegay inay khatar ugu jiraan cunta xumada.”
DAAWO: “Waa Ciiddii Ugu Horreysay Ee Shacabku Ay Ku Ciidayaan Bilaa Cabsi” – Madaxweyne Mustafe Cagjar